Greenhouse "Breadbox": nkọwa na àgwà nke nlereanya - Ụlọ - 2019
Ụlọ gri na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ "Breadbox"
Greenhouse nyere ya ụdị aha aha. Ọ dị ka nri anyị na-adịbu.
Kọmpat, ọ dị mma maka ịrụ ọrụ na ịkwado ihe mma dị mma maka ma na-eto eto akwụkwọ nriya mere na okooko osisi ke okpokoro okpomọkụ.
Kedu ihe bụ griin ha?
Kedu osisi dị mma maka ịmalite?
Atụmatụ nhazi na mgbakọ
Ngosipụta ihe ngosi
Greenhouse nwere dịtụ obere obere, ma enwere ike ịrụ ọrụ na 100%. Ọnụ ụzọ ya meghere abụọ, ekele maka nke kụrụ, ilekọta seedlings na owuwe ihe ubi dị mfe iduga site n'akụkụ ọ bụla. ỤwaAna m anọ n'ime ụlọ jiri nwayọọma na wepụ, n'ihi na n'oge ọrụ, onye na-elekọta ubi adịghị mkpa ịrịọchitere ya n'elu akwa ogige.
"Breadbox" nwere ike mee ya n'onwe gị ma ọ bụ zụta n'ụdị ya. Geometry a na-ahụ anya nke ụlọ ahụ adịghị enye ihe ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ, ya mere, mbipụta ahụ a kwadebere na-eme ka ọ bụrụ akụkụ dị ukwuu, a pụkwara ibuga ya na mpaghara chọrọ nke Gazelle.
Nnukwu griin ha dị mfe: ọ dịghị mkpa ka a ghara ịdọrọ ya na akụkụ iji kpalie site n'otu ebe ruo ebe.
Ọ bụrụ na ị na-eme griin haus naanị m, mgbe ahụ ọ ga-eji ya dịtụ obere ego: site n'ihe dị ka 1500-3000 rubles - dabere na nha. A na-atụle eserese nke ihe nlereanya a ka a mụọ tupu ịmụọ ma họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị ọbụna tupu mmalite ọrụ.
Na "Khlebnitsa" ọ dịghị agafe. Enwere ike iji ohere ime ya mee ihe. Enweghi oke uzo maka ihe atumatu a: ndi choro iji ulo aka ha wuo ya aka kacha mma kpebie tupu oge eruo. A na-achịkọta griin ha site na profaịlụ plastik 20 site na 20 mm. Ogologo osisi ya dị mita 2-4, obosara ya dị 1,3 na mita 2, elu ya dịkwa site na 0.75 ruo 1 mita. Ọ bụrụ na a ghaghị imepụta ihe nlereanya ahụ n'otu aka, obosara ya ka mma ịrụ na ntụgharị nke 0,8 - 1.3 mita. Na ndị dị otú ahụ nkeji nke na-ewu ubi dị mfe ịnọgide na-enwe maka osisi.
Na saịtị anyị, e nwere ihe ndị ọzọ gbasara ụdị greenhouses: Accordion, Innovator, Dayas, Pickle, Snail na omenala ndị ọzọ.
Uru usoro a nwere ọtụtụ:
Egwuregwu ergonomic, ya na arụmọrụ kachasị mma.
Magburu onwe ya arụ ọrụ ụlọ, na-enye ohere ka okooko osisi na akwụkwọ nri dị na ya.
N'ihi na eji ya eme ihe na-abụghị nke na-egbu egbu na naanị ihe eji eme ihe na gburugburu ebe obibi.
Ebu ibu ụlọ ndị na-adịghị emetụta ike na àgwà ha.
Arched shape eme ka snow dị eluma n'otu oge na-egbochi mbibi nke etiti ya n'oge ifufe siri ike ma ọ bụ snowfall.
Ntinye nhọrọ maka owuwu nke ụdị ahọrọ ahọrọ ya n'onwe gị dị mfe dị ka o kwere meenke na-enye gị ohere iwu ya na saịtị ahụ na obere oge.
Otú ọ dị, atụmatụ dị otú ahụ adịghị ezughị okè. Ọ dị ha mkpa ka a tụlee ha ka nsị akwụkwọ nri na okooko osisi zuru ezu ma mepụta.
Ụzọ kachasị mfe iji mepụta "achịcha" ihe nkirina ọtụtụ ndị na-eme. Nke a bụ nhọrọ dị ọnụ ala, mana ya ogologo oge nke ojiji griin ha ajuju, nakwa dị ka okpomọkụ na-achịkwa n'ime ya. Ngwa ahịa obere ego iji tụnyere ndị nwere onwe ha, mana enwere ike iji ha mee ihe ogologo oge.
Ọ dị mkpa: Iji hụ na ikpo ọkụ nke oghere dị n'ime, a na-atụ aro ya iji ihe ndị dị ndụ. Usoro kpo oku ga-enye ohere itinye aka na nsị osisi ruo ogologo oge. Ngwurugwu a na-echekwa ga-emesị mechaa n'okpuru ọkụ, na-amịkwu ọkụ maka osisi ndị ahụ ma na-enye ha nri.
Rama a na-eme ụlọ plastic pipes ngalaba nkeji osisi ma ọ bụ profaịlụ nchara. Tupu mmepụta nke etiti ahụ agaghị adị oke ịtụle atụmatụ nke usoro ahụ. N'elu elu, e nwere ọkara arcs. Ha na-adabere na isi ya na hinges.
Ihe mkpuchi greenhouse "Khlebnitsa" - cell polycarbonate. Ọ dị mfe iji dochie ihe nkiri griin haus. Nhọrọ dị mma bụ ihe a na-akpọ obere nsogbu polyethylene (HDPE). Ebe ọ bụ na a na-eji griin ha eme ihe kpọmkwem maka na-eto eto na-achọ ka microclimate pụrụ iche, polycarbonate ga-adị mma n'ihi na ọ nwere ike chebe osisi na-eto eto sitere na radiation radiation ultraviolet: ma e jiri ya tụnyere ihe nkiri ahụ, ọ ga-eme ka ọkụ dịkwuo mma, ọzọ, ọ ga-enye usoro mgbakwunye ọzọ.
Ụlọ griin ha zuru okè maka na-eto eto tomato, kukumba, elu, akwụkwọ nri mgbọrọgwụ na ụdị dị iche iche okooko osisi. Mkpụrụ osisi na-enweghị atụ ga-akawanye mma ma ọ bụrụ na a kụrụ ha na griin ha, ọ bụghị n'èzí. A na-eme ka mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ mbụ, ọkụ ga-abụkwa ihe okike.
Iji wụnye etiti ahụ, a ga-achọta ya na saịtị ahụ ebe ọkụ. A na-etinye Greenhouse na ntụziaka nke site n'ebe ugwu gaa n'ebe ndịda. Ebe ọ bụ na ọ nwere ihe abụọ, otu ọkara nwere ike ịdabere n'ebe ndịda, na-emepe ya n'ụbọchị ehihie, na nke ọzọ na ugwu.
Ntị! Iji wụnye usoro a chọrọ nkwado. Ekwesịrị ka ahapụ gị ya kọntaktị na ala. Iji chebe griin ha site na mmiri, ọ kachasị mma ịwụnye ya na onye na-ehi ụra ma ọ bụ n'osisi osisi.
Nzukọ ahụ n'onwe ya bụ ọrụ dị mfe. Iji mee nke a, ọ bụ iji mee ka ọtụtụ ebubo na mkpụrụ osisi sie ike na ịkpụ akwa polycarbonate ka ọ dị mkpa.
Nhazi ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịrụ mmezi mgbanwe nke ime obodo. Iji mee nke a, ọ gaghị adịrị ụfụ iji mee ka okwu ahụ dị mfe oghere maka ikuku, nke nwere ike ime dịka piston hydraulic. Mgbe ikpochapu ọkụ, piston ga-ebuli mkpuchi griinụ ma belata ya mgbe ọ na-eme ka ọ dị jụụ.
"Breadbox" ga-abụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ndị bi n'oge okpomọkụ bụ ndị ike gwụrụ na ị na-amịpụta ihe nkiri ahụ na-adịghị agwụ agwụ. Ọ ga-ewe oge iji wuo griin ga-eji aka gị. Ọ ga - ewe na nke kachasị ihe onwunwe nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa ọkachamara kacha nso dị ọnụahịa. Mana nsogbu ndị a niile ga-enyere aka inwetakwa akwụkwọ nri ndị na-enweghị pesticides, ma n'otu oge ahụ zọpụta ego na ịzụta akwụkwọ nri dị oké ọnụ na ahịa ma ọ bụ na nnukwu ụlọ ahịa.
Foto ndị ọzọ nke Khpernitsa griin haus:
Ọtụtụ tomato dị iche iche "Rapunzel": nkọwa na foto, karịsịa nsị
Pears: nke iche dị mma maka akuku n'etiti etiti?
Deer Horn Sumy: na-eto eto n'etiti etiti, na-eji ya eme ihe
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ụlọ gri na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ "Breadbox"